उस्को सिउँदो रंगाउन नपाउदै भीमको प्रेम खोस्यो दैवले ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/उस्को सिउँदो रंगाउन नपाउदै भीमको प्रेम खोस्यो दैवले !
उस्को सिउँदो रंगाउन नपाउदै भीमको प्रेम खोस्यो दैवले !
भीमले भने सुनिताले कलेजबाटै फोन गरेकी रहेछिन् तर मोवाईल साईनेन्समा राखेर सुतेकाले थाहा भएन तर उनको मृत्यु पछि मात्रै मोवाईल हेर्न पाए। मोवाइलमा सुनिताले पठाएको म्यासेजमा मलाई पनि हजुरसंगै काठमाडौँ लिनुहोला भनेर लेखेकी थिईन भीमले भने। तर सुनिता कहिल्यै नफर्किने गरी हिडेपछि उनको धोको पूरा गर्न भीम असमर्थ छन्। उनीसंग अब केवल सुनिताको सम्झना मात्र बाँकी छ। source http://lalkhabar.com